घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू इटालियन फुटबल खेलाडीहरू फेडरिको Bernardeschi बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
LB उपनाम संग एक फुटबल स्टार को पूरा कहानी प्रस्तुत "ब्रुनेलेस्ची“। हाम्रो फेडरिको बर्नार्डिची बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ।
फेडरिको बर्नार्डिचीको जीवन र उदय। छवि क्रेडिट: ThePlayersTribune, वालपेपरcave र Gianlucadimarzio
पूर्ण विश्लेषणमा उसको प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा / क्यारियर निर्माण, प्रारम्भिक क्यारियर जीवन, प्रख्यातताको बाटो, प्रख्यात कथामा बृद्धि, सम्बन्ध जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक तथ्यहरू, जीवनशैली र उहाँबारे अन्य थोरै ज्ञात तथ्यहरू समावेश छन्।
हो, सबैलाई थाहा छ उनी इटालीको सबैभन्दा रोमान्चक र प्रतिभाशाली सम्भावित हुन् जसलाई उसको नजिकको पूर्ण स्थिति भावना र लक्ष्यका लागि आँखाका लागि परिचित छ। यद्यपि फेडेरिको बर्नार्डिचीको जीवनी मात्र केहि थोरैले विचार गर्छन् जुन अत्यन्त चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
फेडरिको बर्नार्डिचि बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
फेडेरिको बर्नार्डिचीको जन्म फेब्रुअरी 16 को 1994th दिनमा उनको आमाको परिवारमा भएको थियो र उनी एक नर्स र बुबा, अल्बर्टो बर्नार्डिची (एक मार्बल कारखाना कामदार) इटालीको टस्कनीको क्षेत्र कारारामा रहेको छ। तल सानो बच्चा फेडरिको बर्नार्डिचीको सुन्दर समुद्री किनारा फोटो छ।
बच्चाको रूपमा फेडरिको बर्नार्डिचीको दुर्लभ फोटो। छवि क्रेडिट: ThePlayersTribune
फेडेरिको बर्नार्डिचीको परिवारको जन्म मध्य इटालीको शहर, कराराराबाट भएको छ र यसलाई यसको लोकप्रिय उपनामले चिनिन्छ; 'संगमरमरको शहर'। अब प्रश्न:… किन संगमरमरको शहर? ... यो किनभने Carrara यसको सुन्दर सेतो Carrara संगमरमर को खदान को लागी प्रसिद्ध छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… तल देखाइएको रूपमा मार्बलको शहर पनि इटालियन लीजेन्डरी गोलकीपरको जन्मस्थान र घर हो Gianluigi Buffon.
Carrara को एक सुन्दर फोटो (संगमरमरको शहर) जहाँ फेडेरिको बर्नार्डिचीको परिवारको उत्पत्ति छ। संगमरमरको शहर। छवि क्रेडिट: carraramarbletour र Pinterest र TuscanyPrivateTour.
फेडरिको Bernardeschi को एक आमा बुबा- उसको बुवा आफ्नो बचपन को दिन मा शहर मा एक संगमरमर फर्म को लागी काम गर्नुभयो। केवल व्यस्त अभिभावक (हरू) को साथ धेरै बच्चाहरू जस्तै, फेडेरिको केवल हरेक साँझ आफ्नो बुबालाई देख्न सक्दछन् अल्बर्टो5बिहान ओछ्यानबाट उठेर6बिहान घर छोडेर6बजे घर फर्कदै धेरै घण्टा काम गर्ने थियो, त्यसैले फेडेरिकोले आफ्नो प्रारम्भिक बचपनको जीवन आफ्नो आमा र सानी बहिनी, गायियासँग बिताए।
फुटबल बलको साथ नियति मुठभेड: जब फेडेरिको बर्नार्डिची तीन वर्षको थिए, उनको बुवाले उनलाई कारारा शहरको बीचमा रहेको यो विशाल खेलौना पसलमा लगे। जब जवान फेडरिको स्टोर भित्र दुई कदम चाले, उनले पहिलो चीज भनेको फुटबल हो। तुरुन्तै, उहाँ सीधा यसको तिर दौडनुभयो, यसलाई उठायो र आफ्नो बुबालाई उनीहरूको बिदा हुने समय हो भन्यो। अल्बर्टो फेडेरिकोलाई अन्य खेलौनाहरू हेर्न चाहन्थे, तर ऊ फुटबलको बल मात्र चाहान्थ्यो भनेर उनले इन्कार गरे।
"किनकि मैले के देखेको थिएँ" एक फुटबल ", मैले केहि पनि आफ्नो बाटोमा जान दिएन। त्यो मेरो चरित्र हो वा मैले भन्नु पर्छ, यो मेरो परिवारको जराका चरित्र हो। कराराका मानिसहरू संगमरमरको जस्तै कडा छन् - अधिक जानकारी प्राप्त गर्नका लागि सोध्नुहोस् गिगी बफन। "
फेडरिको बर्नार्डिचि बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
आफ्नो जीवनको प्रारम्भमा, फेडरिकोले एक पेशेवर फुटबलर बन्ने चाहनाको अन्तिम छनौट गरे। सुरुमा, सर्वश्रेष्ठ फुटबल शिक्षा प्राप्त गर्ने उनको खोजीमा चुनौतीहरू थिए। फेडरिको बसोबास गर्ने ठाउँमा, मार्बलको शहरमा, त्यहाँ वरिपरि राम्रो युवा टीमहरू थिएनन्। पछि, आफ्नो छिमेकमा सबै भन्दा राम्रो टीम, एएसडी स्पोर्टि At एटलेटिको कारारा उनीहरूसँग थोरै समय बिताएपछि उनका आमा बुबाले चाहानु भएको कुरा प्रदान गरेन।
आफ्नो छोराको लागि उत्तम कुराको लागि, फेडेरिको बर्नार्डिचीका आमाबाबुले छनौट गर्नुपर्‍यो। दुबै उसको आमा र बुबा सहमत हुनुभयो कि उनीहरूको छोराले चाँडो स्कूल छोड्नेछ 3: 15 बजे (45 मिनेट पहिले स्कूल कक्षा सामान्य रूपमा अन्त्य भयो) नयाँ एकेडेमीको साथ फुटबल खेल्न जानको लागि।
एडेलेटिको काराराको साथ फेडेरिको बर्नार्डिची प्रारम्भिक क्यारियर जीवन। क्रेडिट: आईजी
आठ वर्षको उमेरमा फेडेरिको बर्नार्डिचीले फुटबलको शिक्षा प्राप्त गर्न शुरू गरे Polisportiva Ponzano, एम्पोलीसँग सम्बद्ध फुटबल प्रशिक्षण केन्द्र, उसको परिवार घरबाट लगभग 70 माईल टाढा। त्यस पछि, उसको आमाले उसलाई स्कूल बन्द गर्थ्यो समय बन्द हुनुभन्दा अघि, उसलाई खाजा खानु (सामान्यतया पास्ता) र त्यसपछि उनलाई परिवारको खैरो संग इम्पोली तिर ड्राइभ गर्नुहोस् ओपल भेक्ट्रा। दैनिक अनुभवको रूपमा बोल्दै ThePlayersTribune फेडेरिको बर्नार्डिचीले भनेका थिए;
“किनभने मलाई थाहा छ म प्रायः अलि ढिलो हुन्छु। मैले मेरो जुत्ता कारमा बाँध्नुपर्नेछ। मेरो आमा मुश्किलसँग रोकिन्थ्यो। पुगेपछि, म मेरो प्रशिक्षण सत्रमा जानको लागि पिचमा स्प्रिन्ट गर्नेछु। दुई घण्टा पछि, फुटबल प्रशिक्षण समाप्त हुन्छ, र हामी जस्तो आयो हामी फर्कन्छौं। ”
उनी व्यस्त स्कूली शिक्षा र खेलकुद दिनबाट घर पुगे पछि पनि फेडरिको बर्नार्डिचीका आमाबुबा र परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई उनी थाँहा हुन थालिसकेका थिए। ठूला चीजहरूका लागि नियतले उनीहरूले अझै उसले सिकेको कलाको समीक्षा हेर्छन्।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… फेडेरिको 10: 30 अपरान्ह वा 11 बेलुका हरेक साँझ सम्म ओछ्यानमा हुनुहुन्न, त्यसपछि बिहान सबेरै फेरि उठेर यो सबै गर्नका लागि। यस्तो दृढ संकल्प र कडा परिश्रम पछि यसको लाभांश तिर्न। जब फेडेरिको बर्नार्डिची फ्लोरेन्टिनाको साथ ट्रायलमा उपस्थित हुन बोलाए, परिवारका सबै सदस्यहरूको गर्व (उहाँसँग मेरो यात्राको प्रत्येक पाइलामा उहाँ बस्नुभयो) को कुनै सीमा थिएन।
फेडरिको बर्नार्डिचि बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
एक सफल परीक्षण वर्ष 2003 मा फेडेरिको बर्नरदेस्ची देखे9 को उमेरमा) Fiorentina को एकेडेमी शाखा मा सामेल। फ्लोरन्स, शहर जुन क्लब अवस्थित छ इम्पोली भन्दा अलि धेरै पूर्वमा, उही राजमार्ग फेडरिको र उसको आमाले ड्राइभ गरेको थियो।
आफ्नो क्यारियरको शुरुमा, फेडेरिको बर्नरदेस्चीका बुबाले मलाई सँधै राम्रो गर्न थाल्नुभयो र हरेक गुमाएको अवसरको लागि उहाँसँग रिसाएको महसुस गर्नुभयो। आफ्नो बुवाले सिर्जना गरेको दबाबको प्रबन्ध गर्न फेडेरिकोले एक पटक भने;
“जब तपाईं बच्चा हुनुहुन्छ, कहिले काहिं तपाईंलाई धेरै नै लाग्दछ विशेष गरी जब यो बुबाबाट आयो जो तपाईंलाई रिस उठ्छ कुनै पनि क्षणको लागि तपाईं आफ्नो उत्तममा राख्नुहुन्न।
तर जब म अलि ठूलो भएँ, मैले बुझ्न थाल्नु भयो कि मेरो बुबाले मलाई धेरै चाहानु भएको थियो किनभने उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्वास म भित्र"
उसको बुवाले उठाएको दबाबले सानो फेडरिकोलाई क्लबसँग ठूलो प्रभाव पार्न उक्सायो जब ऊ युवा वर्गको बीचबाट माथि उक्लन्छ र कुनै पनि विपक्षीमा उसको बाटो आउँछ।
Federico Bernardeschi शुरुआती वर्ष Fiorentina साथ। छवि क्रेडिट: आईजी
फेडरिको बर्नार्डिचि बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
एक्सएनयूएमएक्सको उमेरमा, फेडरिको बर्नार्डिची जो आफ्नो जीवनको सर्वश्रेष्ठ फुटबल खेलिरहेका थिए फिरोरेन्टिनाको साथ वरिष्ठ टीम देखा पर्दा धेरै बन्द भइरहेको थियो। जसरी उसले सोचे कि उसको जीवनमा सबै चीज सहजै चलिरहेको छ। दुर्भाग्यवस त्यस्तै भयो.
दुखद समाचार: यो सबै दिनको सुरु भयो गरीब फेडेरिको नियमित शारीरिक जाँचको लागि गए। फ्लोरेन्टीना मेडिकल टोलीले केहि भेट्टायो, जुन उनीहरूले उनको शरीरमा गल्ती हुँदै गएको भन्दै उनीहरूलाई थप टेस्ट र एक्सरे बनाउन प्रेरित गरे। केही दिन पछि, डाक्टरले फेडरिको बर्नार्डिचीका बाबुआमालाई उनीहरूको छोरोको शरीरमा देखेका कुरा संक्षिप्तमा बताए।
“तपाईंको छोराको ठूलो हृदय छ। हामी पक्का छैनौं यो कति खराब छ। यद्यपि यो सम्भव छ उसले आफ्नो फुटबल क्यारियर जारी राख्न सक्दैन। "
डाक्टरले उसका बाबुआमालाई भने। अपेक्षित रूपमा, फेडेरिकोले यसलाई विश्वास गर्न सकेन, वास्तवमा, उसले यो सुन्न अस्वीकार गर्यो, चिच्यायो .. "होईन ... त्यो असम्भव छ ". फेडेरिकोकी आमाले समस्याग्रस्त फुटबलरलाई शान्त राख्नको लागि यत्ति धेरै प्रयास गरे।
फेडेरिको बर्नार्डिचीलाई कार्डियोमेगाली पत्ता लागेको थियो जसको अर्थ एक ठूलो हृदय हो। छवि क्रेडिट: WebMD
परिस्थितिलाई नजीकबाट हेरिसकेपछि डाक्टरहरूले अन्तमा संकल्प गरे कि फेडेरिको six महिना मात्र फुटबल खेल्न सक्नेछैनन्। यस समाचारले बर्नार्डेसी परिवारलाई ठूलो राहत पाएको छ। पर्खाइको समयमा उनले आफूलाई व्यस्त राख्न खोजे जुन उनको जीवनको सब भन्दा कठिन six महिना हो। अनगिनत चेक-अप, विशेषज्ञ भ्रमण र बैठकहरू पछि, फेडेरिको अन्ततः उनको फुटबल फिर्ता शुरू गर्न खाली गरियो।
फेडरिको बर्नार्डिचि बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
20 जुन 2014 मा, फेडेरिको भिन्सेन्जो मोन्टेलाको निर्देशनमा पहिलो टीममा प्रवेश गरे। तीन वर्ष भन्दा कममा आफ्नो व्यावसायिक डेब्यू पछि, (उमेरको 22), जवान फेडरिकोलाई कप्तान आर्म्बान्डको जिम्मा दिइयो धन्यवाद परिपक्वता, कडा परिश्रम, राम्रो स्थिति भावना र लक्ष्य को लागी एक आँखा। 22 को छोटो उमेरमा नेता हुनु इटालियन फुटबलको सन्दर्भमा धेरै युवा मानिन्थ्यो जहाँ अनुभवलाई उत्कृष्ट रूपमा व्यवहार गरिन्छ।
अर्को सीजन (2015 – 16), Bernardeschi थियो नम्बर 10 शर्ट प्रदान गरियो जुन पहिले रोबर्टो बग्जियो जस्तै लगाइएको थियो। एकै साथ, उसले आफ्नो उपनाम पनि पायो "Brunelleschi", लोकप्रिय वास्तुकार पछि। धन्यवाद उसको प्रविधि र पिचमा भव्यताका लागि।
बर्नार्डिचीले १० जर्सी समाते - त्यो प्रतीकात्मक टीम संख्या रोबर्टो बग्गीओले पहिले जितेको थियो। छवि क्रेडिट: कालो whitereadallover
पिचमा क्यारिज्म्याटिक नेताको रूपमा, फेडेरिको बर्नार्डिचीलाई एआईएसी फुटबल नेता अन्डर-एक्सएनयूएमएक्स पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो। सफलता त्यहाँ रोकिएन, उनी यूईएफए यूरोपीय अण्डर-एक्सएनयूएमएक्स चैम्पियनशिप टीम टुर्नामेन्ट उपलब्धीका लागि लाइनअपमा एक मात्र इटालियन बनिन्। यो उपलब्धीले युरोपका केही शीर्ष क्लबहरूको आँखा खिच्यो।
इटालियन फुटबलको सबैभन्दा लोकप्रिय युवा गुण मध्ये एक बन्नुहोस् फियोरेन्टीनाका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी, जुभेन्टस जसले उनीलाई बाग्जियो (1990 मा) पछि फ्लोरेन्स छोड्ने सबैभन्दा उच्च प्रोफाईल खेलाडी बनाए। लेखेको समयमा जस्तोफेडरिको बर्नार्डिचीले आफ्नो टीमलाई इटालियन लिग फुटबलमा लगभग जित्ने सबैलाई सहयोग पुर्‍याएको छ; सेरी ए, कोप्प्पा इटालिया र प्रतिष्ठित सुपर्कोपा इटालिया.
फेडेरिको बर्नार्डिचीको उदय र उदय। छवि क्रेडिट: पिन्टेरेस्ट, फुटी एनालिस्ट,
एक पल्ट एक पल्ट, फुटबल भन्दा अन्य खेलौना छनौट गर्न इन्कार गरेको बच्चा अब छ प्रख्यात एक meteoric वृद्धि सहन हाम्रो धेरै आँखा अगाडी। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
फेडरिको बर्नार्डिचि बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
प्रत्येक सफल पुरुषको पछाडि, त्यहाँ एक अचम्मित महिला छ जसले उनको आँखा घुमाइरहेको छ। Azzurri अन्तर्राष्ट्रिय को मामला मा, त्यहाँ साँच्चै एक ग्लैमरस WAG थियो जो पछि एक प्रेमिका बन्छ। उनी सुन्दर व्यक्तिको बाहेक अरु केही होइनन् भेरोनिका सिआर्डी.
फेडेरिको बर्नार्डिची गर्लफ्रेंड- भेरोनिका सिर्डीसँग भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: DropNews
भेरोनिका Ciardi चिन्न: इटालियन अभिभावकको जन्म, भेरोनिका बिग ब्रदरको 2009 इटालियन संस्करणमा मनपर्ने प्रतियोगीहरू मध्ये एक बन्नुभयो। रियलिटी शोमा उनको समयमा, उनले सारा नील नाम गरेकी अर्को प्रतिस्पर्धीसँग सम्बन्ध विकास गरे। सम्बन्ध एक थियो जसले इटालियन टेलिभिजनमा एक घोटाला कारण यो पहिलो थियो प्रेमिकालाई प्रेमिका इटालियन रियलिटी शोमा प्रसारित हुने प्रेम कहानी।
फेडरिको बर्नार्डिची गर्लफ्रेंड- भेरोनिका सिआर्डी र उनको प्रेमी सारा नील। छवि क्रेडिट: गुलाबीमन्स्टर
भेरोनिका र साराको सम्बन्ध सेप्टेम्बर 2010 मा इटालियन प्रेसको धेरै दबाब पछि समाप्त भयो। भेरेनिकाभन्दा नौ बर्ष भन्दा कान्छी फेदेरिको बर्नार्डिचीले फोरमेन्टेरामा पहिलो पटक देख्ने सभामा उनीहरूलाई माया गरेको केही वर्ष पछि उनीसँग डेटि। गर्न थाले।
दुई आश्चर्यजनक वर्षको डेटि After पछि, बर्नार्डिची जसले उनको बिग ब्रदर भाइहरूका कमीकमजोरीहरूलाई हेरेनन, उनले आफ्नी प्रेमिकालाई इटालियन प्रेसले भनेको कुरा रोमान्टिक गन्तव्यमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरे।
Bernardeschi दुई वर्ष डेटि after पछि आफ्नो प्रेमिका को प्रस्ताव। छवि क्रेडिट: forzaitalianfootball
दुर्भाग्यवश, चीजहरू जोडीका लागि राम्ररी चल्दैनन् किनभने उनीहरूले घोषणा गरे 2017 को शुरुमा सुहाउँदो विभाजन। आफ्नो प्रेमिका संग सम्बन्ध सम्बन्धको बारेमा बोल्दै, बर्नार्डिचीले भने कि यसले उसलाई एक व्यक्तिको रूपमा बढेको छ। उनीहरूको दुर्भाग्यपूर्ण विभाजनको पाँच महिना पछि, फेडेरिकोको पूर्व प्रेमिकाले आधिकारिक रूपमा इन्स्टाग्राम मार्फत उनको बिदाई प्रकट गर्‍यो।
उनीहरूको विभाजनको केही वर्ष पछि, दुबै भूतपूर्व प्रेमीहरूको स came्कट अन्त्य भयो किनभने तिनीहरू एक अर्कासँग डेटि to गर्न फर्केका थिए, जुन उनीहरूको सम्बन्धलाई महिनौं गोप्य राखेका थिए। अगस्त 28 को 2019th मा, भेेरोनिका र फेडेरिको आमा बुबा बने।
फेडरिको बर्नार्डिचि बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
फेडेरिको बर्नार्डिचीको व्यक्तिगत जीवनको बारे जान्ने मद्दत गर्दछ कसरी राम्रो चित्र प्राप्त गर्न को लागी ऊ पञ्चबाट कसरी बाँच्दछ।
किनभने त्यहाँ हुर्कने क्रममा उसको वरिपरि धेरै सेतो रंगको संगमरमर थियो, फेडेरिकोले भने कि यी झुण्डाहरू कहिलेकाँही उनको सपनामा फुत्किन्छ जब उनी ओछ्यानबाट उठ्दा उसको टाउकोमा छवि बनाउँछन्। यो रहस्यमय घटना शुरू भयो जब उहाँ छ वर्षको हुनुहुन्थ्यो।
फेडरिको बर्नार्डिची व्यक्तिगत जीवनलाई टाढाबाट चिन्न। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
उसको कुकुरको लागी उदारता: लोकप्रिय फुटबल खेलाडीहरू, अर्थात् सी रोनाल्डो, नेमार, sanchez आदि वास्तविक कुकुर प्रेमी हुन्। यहाँसम्म कि त्यहाँ एक भनाइ छ कि आधुनिक खेलमा कुनै वफादारी छोडियो, यसले निश्चित रूपमा फेडेरिको र उसको ठूलो कुकुर बीचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दैन।
फेडरिको बर्नार्डिस्की फुटबलको सब भन्दा ठूलो कुकुर प्रेमी हो। इन्स्टाग्राममा क्रेडिट
फेडरिको बर्नार्डिचि बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
बर्नार्देशी परिवारको कथा यसमा पहिले वर्णन गरिएको थियो, फुटबल प्रशंसकहरूलाई संघर्ष गरिरहेको सिकाउँदछ, तैपनि विश्वास गर्न महानता हासिल गर्न आकांक्षी छ। 'निराश नहुनु उत्तम तरिका भनेको उनीहरूको आराम क्षेत्रबाट उठेर केही फरक गर्नु हो'। यसको सट्टामा उसको बुबालाई पछ्याउनु मार्बल उत्तरी संचालन, फेडेरिकोले आज आफ्नो सम्पूर्ण परिवारलाई गर्व बनाएको छ फुटबलको लागि धन्यवाद, आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि आफ्नो परिवारको आफ्नो विगतको फोर्जिंग। अब, हामी तपाईंलाई उसको परिवारका सदस्यहरूमा अझ अन्तर्दृष्टि दिन्छौं।
फेडरिको बर्नार्डिची बुबाको बारेमा: 'मा धेरै अभिभावक जस्तैCarrara'मार्बलको शहर, फेडरिको बुबा अल्बर्टोले वर्षौं बित्तिकै कारारा मार्बल उत्खनन फर्ममा काम गर्नुभयो। उहाँ बुबा जस्तो हुनुहुन्थ्यो जसले धेरै घण्टा काम गर्नुभयो, बिहान5बजे उठ्नुभयो,6बिहान काम छोड्नुभयो र6बजे घर फर्कनुभयो भने उहाँ यातायातका अन्य साधनहरू लिनुहुन्छ जबकि आफ्नो खरानी ओपल भेक्ट्रालाई आफ्नी पत्नी र छोराको लागि छोड्नुभयो ( फेडरिको) घर, अस्पताल, स्कूल र फुटबल प्रशिक्षण केन्द्र बीच शट्लिंगमा प्रयोग गर्न।
अल्बर्टोलाई उनको पहिलो तिथि नियतको साथ बनाउनको लागि श्रेय दिइन्छ जुन उसले खेलौना पसलमा लगेको क्षणदेखि सुरु भयो जहाँ उसले आफ्नो पहिलो फुटबल बल छान्छ। साथै, उसलाई धक्का गर्दै क्यारियरको प्रारम्भिक क्षणहरूमा राम्रो गर्यो जुन भुक्तान गरिएको छ।
फेडरिको बर्नार्डिचीको आमाको बारेमा: तपाईको नाम लेख्ने समयमा अज्ञात छ। यद्यपि इटालियन मिडियामा फेडेरिकोको आमाले उनीहरूको परिवारको घरबाट टाढा रहेको अस्पतालमा नर्सको रूपमा काम गरिसक्यो। उनी यति मायालु थिइन्, तर कहिले कतै आफ्नो छोरोलाई आधार बनाउन स्विच पल्टाउँछिन्। फेडरिकोको लागि, उनी र उसको बुवाको माझमा, एक राम्रो सन्तुलन थियो (प्लेयर ट्रिब्यून रिपोर्ट)।
फेडरिको बर्नार्डिचीका भाई बहिनीहरूको बारेमा: यस्तो देखिन्छ कि उसको भाई छैन, तर फेडरिकोको एक बहिनी छ जसको नाम गायिया बर्नार्डेची छ। गायिया को लागी परिचित छ उसको भाइलाई भावनात्मक सहयोग पुर्‍याउनु पनि तपाईको व्यक्तित्वलाई जाँच्नको लागि हो।
फेडरिको बर्नार्डिचीको बहिनी- गाइया बर्नालाई भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: फेसबुक
उनले आफ्नो प्रशंसकहरूको ध्यान खिचे जब उनले आफ्नो भाइको बारेमा विवादास्पद पोष्ट गरे जब उनले आफ्नो पुरानो क्लब फिरेन्टीना बिरुद्ध गोल गरे। फेडरिको बर्नार्डिचीकी बहिनीले एक पटक भनेकी थिइन;
“प्रिय भाइ, तपाईं Fiorentina प्रशंसकहरूलाई संगीतमा बदल्न सक्षम थिए। तपाईं आफ्नो खुट्टा मा बल संग नृत्य र त्यसपछि स्टेडियम चुपचाप, ... तपाईं एक ठूलो भाई हुनुहुन्छ !!! प्रिय फिओरेन्टीना फ्यानहरू, म तपाईको लागि दु: खी छु, तर सधैँ, मेरो भाईले मानिस र खेलाडी को प्रकार देखायो। अब सबैजना शान्त छन् र हामी यसको धेरै आनन्द लिइरहेका छौं।
फेडरिको बर्नार्डिची बहिनी जियानाका यी शब्दहरू एक्सएनयूएमएक्स फेब्रुअरी एक्सएनयूएमएक्समा थिए, जब उनका भाइले खेलमा प्रशंसकहरूबाट अश्‍लील अपमान गरे जसमा उनले दोस्रो हाफमा भीडलाई चुप गराउन फ्री किक बनाए।
फेडरिको बर्नार्डिचि बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली
शीर्ष फुटबल सुपरस्टारहरूको जीवन शैली सजिलैसँग उनीहरूको निजी जेटहरू, ठूला हवेलीहरू, र सरल आनन्दहरू द्वारा सजिलैसँग देख्न सकिन्छ। फेडेरिको, तपाईं धेरै ठूला जीवनको औषधी हुनुहुन्छ सरल कारहरू चलाउन रुचाउनुहुन्छ, एउटा यस्तो उपलब्धि जुन जीवितलाई चित्रण गर्दछ औसत जीवन शैली।
बर्नार्डिची एक विदेशी जीवनशैली प्रदर्शन गर्नको लागि एक औषधि हो। छवि क्रेडिट: लक्जरी-आर्किटेक्चर, अटोबाइटेल र फिरेन्टीना आईटी
आफ्नो औसत जीवनशैलीमा पनि फेडेरिकोको आधुनिक अपार्टमेन्ट तीन वानाहरूको मूर्तिकलाले सजाइएको छ, एउटा बाँदरको चिराख र एउटा संगमरमरको शतरंजको खेल सेट, उसको बुवाको उपहार थियो जुन उनको आफ्नै शहर काराराबाट आएको थियो।
फेडरिकोको लागि, यो घरमा बस्न सजिलोको बारेमा होईन, तर छुट्टिहरू सुन्दर समुद्र किनारका गन्तव्यहरूमा खर्च गर्दै।
फेडरिको बर्नार्डिचीले आफ्ना केही पैसाहरू समुद्री किनार भ्याकेसनहरूमा खर्च गर्दछन्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
फेडरिको बर्नार्डिचि बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
एक पटक एक कालो बच्चा अपनाएको आरोप छ: फेडरिको बर्नार्डिची फुटबल महत्वपूर्ण छ भन्ने विश्वास गर्दछन, तर उसको लागि विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो '।दान'। किनभने फेडेरिको सँगसँगै उसकी प्रेमिका- Veronica Ciardi महान राजदूतहरू हो छोराछोरीलाई बचाउनुहोस् गैर-सरकारी संगठन। यसले उनीहरूको हेरचाहमा रहेको सुन्दर केटीको जीवनमा सुधार देखिएको छ।
फेडरिको बर्नार्डिची र गर्लफ्रेंड कालो बच्चाहरु को लागी माया संग सेतो हस्तीहरु को शुद्ध उदाहरण हो। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
फेडरिको बर्नार्डिचीको ट्याटुले एक मृत मित्रको सम्झना ल्याउँदछ: आफ्नो Ave मारिया प्रार्थना टैटू बाहेक, फेडेरिको सँग पुरानो मृत साथीको शर्ट नम्बरको ट्याटू रेखाचित्र छ। डेभिड अस्टोरी बितेको केही हप्ता पछि, उनले परम्परागत क्याथोलिक प्रार्थनाको छेउमा आफ्नो ट्याटू पत्ता लगाए।
फेडरिको बर्नार्डिचीले डेभिड अस्टोरीलाई आफ्नो नम्बरको ट्याटूको सम्मान गर्दछन्। छवि क्रेडिट: अवधारणा र ThePlayersTribune
फेडरिको बर्नार्डिचीको धर्म: उनका बाबुआमाले उनलाई क्याथोलिक पालेका थिए र उनी इसाई धर्मको अभ्यासमा अत्यन्त समर्पित थिए। क्याथोलिकतासँग सम्बन्धित उनको कडा अनुभूति को प्रमाण उनको हात मा Ave मारिया टैटू मसी र तल पोप संग आफ्नो फोटो मा पाउन सकिन्छ।
फेडेरिको बर्नार्डिचीको धर्मको बारेमा। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
संयुक्तका लागि एक पटक लक्ष्य: फेडरिको, जब उहाँ किशोर हुनुहुन्थ्यो, जस मध्ये एक प्रतिभाले सरलाई प्रभावित गर्‍यो एलेक्स फर्गसन। पहिलेको म्यानचेस्टर युनाइटेड बॉस एक पटक यति प्रभावित भए कि उनले उनलाई फेरि एक्सएनयूएमएक्समा हस्ताक्षर गर्न चाहे। तपाईंलाई थाँहा थियो?… चाल पूरा गर्न सकिएन किनकि फेडेरिकोका बुबाले उनलाई आफ्नो मातृभूमिमा रहन राजी गर्नुभयो।
फेडरिको बर्नार्डिचि बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - भिडियो सारांश
यस प्रोफाइलको लागि हाम्रो YouTube भिडियो सारांश तल फेला पार्नुहोस्। दयालु भ्रमण गर्नुहोस् र सदस्यता लिनुहोस् हाम्रो YouTube च्यानल. साथै, सूचनाहरूको लागि सदस्यता बेल प्रतीकमा क्लिक गर्नुहोस्।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो फेडरिको Bernardeschi बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू पढ्नको लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।